अमिताभ र दिपीकाभन्दा प्रभास महंगा - नेपालबहस
अमिताभ र दिपीकाभन्दा प्रभास महंगा
| १६:४८:०२ मा प्रकाशित
२५ असोज, एजेन्सी । दक्षिण भारतीय चलचित्रका सुपरस्टार प्रभास बलिउडका कलाकारभन्दा पनि महंगा भएका छन् । उनले हालै एक नयाँ चलचित्रमा पनि काम गरिरहेका छन् । यो फिल्मसँग बलिउडका बादशाह मानिने अमिताभ बच्चन र दीपिका पादुकोणका पनि जोडिएका छन् ।
तर भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो फिल्म खेल्न प्रभासले दिपिका र अमिताभभन्दा पनि महंगो पारिश्रमिक लिएका छन् । प्रभास र दीपिकासँग निर्माण कम्पनीले यसअघि नै सम्झौता गर्दा केही दिनअघि मात्रै अमिताभ जोडिएका हुन् ।
अमिताभ जोडिएपछि प्रभासले खुशी व्यक्त गरेका छन् । तर दिपिका र अमिताभभन्दा प्रभासले महंगो रकम लिएका र उनी नै फिल्मको मुख्य कलाकार भएका पनि निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । दिपिका र अमिताभले पनि प्रभासको महंगो पारिश्रमिकमा सहमति जनाएका छन् ।
बाहुबलीबाट उदाएका प्रभास पछिल्लो समय बलिउडका प्रभावशाली नायक हुन् ।
दशैँमा उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने यात्रु उल्लेख्य रुपमा कम ६ घण्टा पहिले
कलंकी थानकोट सडक २१ घण्टा पहिले
नेकपा केन्द्रीय कमिटीकाे तेस्रो बैठक स्थगित २ दिन पहिले
भारतको नयाँदिल्लीको वायु झन झन प्रदुषित ६ दिन पहिले
कोरोना संक्रमितका लागि प्लाज्मा संकलन अभियान शुरु ३ हप्ता पहिले
यी हुन् असोज २६ र २७ गतेका मन्त्रिपरिषद बैठकका ११ निर्णय २ हप्ता पहिले
माछापुच्छ्रे बैंकको १९ वटा निःशुल्क सेवा, असोज महिनाभर छुटै–छुटको वहार १ वर्ष पहिले
भक्तपुरमा सवारी चलाउदै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुस है , कारवाहीमा पर्नुहोला ! १ वर्ष पहिले